‘तिम्रो सुन्दर रूपमा बस्छु म’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
सबै गीत, कविता वा कथा लेख्दा सधैंजसो रूमानी भावले मात्रै काम गर्छ भन्ने होइन । सृजनाका हकमा सधैंसधैं स्वैरकल्पना मिसिएकै हुन्छ भन्ने केही छैन । गायक गणेश रसिकले साढे ३ दशकअघि बेहोरोको एउटा क्षणसँग कसरी एउटा अमूर्त अनुभूतिले जीवन्त सृजना बनाएको थियो भन्ने दृष्टान्त यहाँ पेस छ ।
मंसिर ११, २०७८ गणेश रसिक
४७ वर्ष लामो सहयात्रा र सहचार्यपछि जीवनसाथी नीरा शेरचनले एकाएक साथ छाडिन् । र, म एक महिनायता एक्लिएको छु । संयोग के छ भने काठमाडौंमा डेरा जीवनबाट सुरु भएको नीरासँगको सहयात्रा डेरामै टुंगिएको छ, पत्यारै नहुने गरी । २०३१ सालको एक शुभसाइतमा हामी धोबीचौरको डेरामा थियौं, नवजीवनको तादात्म्य र उन्माद बोकेर ।
लगत्तै कालिकास्थान सर्‍यौं अनि धोबीधारा र त्यसपछि जाउलाखेल । २०३४ सालतिर हामी नक्साल भगवती–बहालछेउको डेराघरमा आइपुग्यौं । कर्नेल गेहेन्द्रजंग थापाको पहेंलो घरमा हामी डेरामा बसेका थियौं ।
यी कर्नेल एक जना इन्जिनियर हुन्, जसले राजविराजको सहरीकरण योजना तय गरेका थिए । कर्नेलको घर नक्साल क्षेत्रकै राम्रो भएकाले ००७ सालदेखि नै त्यहाँ मन्त्री र उच्च पदस्थहरू भाडामा बस्थे । परिस्थितिवश त्यही घरमा म डेरा गर्न पुगें । कस्तो किस्सा चलेको थियो भने त्यो घरमा बस्नासाथै कोही मन्त्री भइहाल्नेछ भन्ने थियो । तर, म त्यो कोटामा परिनँ ।
गणेश रसिककी जीवनसाथी स्वर्गीय नीरा शेरचन
आफ्नो काम र कुदाकुद चलिरहेकै थियो । गायक भइटोपलेको नचाहिँदो ‘भ्रम’ साथैमा थियो, साथमा लेकाली छँदै थियो । त्यही रन्कोमाझ आफूले चाहेको काममा उपलब्धि मिलोस्, मनमा शान्तिले बास गरोस्, मन चञ्चल नबनोस् भन्नैका लागि म घर–आँगनको भगवतीबहाल जान थालेँ । नियमित भगवतीको आराधना गर्न थालेँ । अचम्मैसँग मलाई देवी–देउताप्रति आस्था जाग्न थाल्यो । बहालमा रहेका बूढा–पुराना श्रद्धालु र त्यहाँका पुजारीहरूलाई भगवतीबहाल र त्यहाँको मूर्तिबारे जिज्ञासा राख्न थालेँ । लिच्छविकालीन भगवती मूर्तिबारे अनेक किस्सा रहेछन्, त्यसमध्ये एउटा भने कला सृजना र साधनामा जोडिएको रहेछ, त्यसले मलाई हुरुक्कै पार्ने गरी छोयो । अनि, त्यसैको सोधीखोजीमा म लागेँ ।
सोधीखोजीकै क्रममा काभ्रेमा रहेको पलाञ्चोक भगवती, शोभाभगवती र नक्साल भगवतीबारे एउटै युगको एउटै कलाकारको ‘मिथ’ जस्तै सूचना पाएँ । लिच्छविकालीन एक राजाकै पालामा एक स्थानीय कलाकारले पलाञ्चोक भगवतीको मूर्ति बनाएका थिएछन्, मूर्ति बन्दै गर्दा यो खबर राजाकहाँ पुग्नासाथै ‘आफ्नो अनुमति नलिई बनाएको’ अथवा ‘आफूलाई बढी क्षमतासिद्ध देखाउन खोजेको’ भन्दै राजाले त्यो कलाकारको दाहिने हात काटिदिएछन् । तैपनि कला र कलाकारको त्यो ढिट स्वभाव तथा हृदयदेखिको लगाव त बाँचेकै थियो । फेरि अर्को चरणमा त्यही कलाकारले देब्रे हातका भरमा शोभाभगवतीको मूर्ति बनाएछन्, राजाले यो थाहा पाएर उसको देब्रे हात पनि काटिदिए । पलाञ्चोक भगवतीलाई नेपालकै उत्कृष्ट शिल्पी भएको मूर्तिका रूपमा लिने गरिन्छ । नभन्दै दाहिने हातले बनाएको मानिने पलाञ्चोक भगवतीको ‘फिनिसिङ’ निकै राम्रो छ, देब्रे हातले बनाएको शोभाभगवती ठीकै मात्र छ । यो ‘रे’ को कुरा मात्रै हो अथवा यसमा केही ऐतिहासिकता र तथ्य छ भन्ने सरोकार अझै पनि मेरो खोजीमै छ ।
संयोगले काभ्रेनिवासी स्थानीय विषयका जानकार अध्येता गोपीकृष्ण खरेललाई पनि मैले यो मूर्तिको किस्सा र कलाकारको लगावबारे सरोकार राखेको थिएँ । उहाँले यसको ऐतिहासिकता र सुनेबुझेको कुरा सुनाउनुभएको थियो । लाजिम्पाटमा डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालयमा रहेको ‘लिच्छविकालीन सन्दर्भ’ पुस्तकमा भगवती मूर्तिबारेको ऐतिहासिकतामा केही लेखिएको जानकारीसमेत दिनुभयो (सम्भवतः यो कृति ‘लिच्छविकालीन अभिलेख’ हुन सक्छ ।) यसबारे इतिहासविद् दिनेशराज पन्तलाई पनि एक पटक सोधेको थिएँ, तत्कालै खासै जवाफ पाइनँ । तर, आफ्नै दौडधुप र बीचमा कोरोना संक्रमणको बहानाबाजीमाझ भगवती मूर्ति निर्माणबारे मैले थप जानकारी पाउन सकेको छैन ।
तर, कहीँ–कतैबाट कहानी बन्दै आएको ‘रे’ कै कुरा भए पनि मलाई भगवतीको मूर्तिमा जोडिएको विषयले सधैं खोतलिरह्यो— मन–मस्तिष्कमा । मैले यसमा धार्मिक वा आध्यात्मिक दृष्टिभन्दा पनि मूर्ति सृजनाप्रति कलाकारको प्रेम देखेँ । प्रेम र समर्पण कतिसम्म भने त्यही कलाकारले दुवै हात काट्दा पनि हार नमानेर खुट्टाले समेत मूर्ति बनाएको किस्सा पनि सुनेको थिएँ ।
यही प्रभाव र अलौकिक खालको अमूर्त भावमाझ मैले २०६० सालतिरै एउटा मूर्ति–गीत लेखेँ । भनिन्छ— कवि–गीतकारहरू लहडी हुन्छन्, भावनामा बत्तिहाल्ने । तर, भगवती मूर्तिको कथानकमा मैले जे कुरा लगातारजसो सुन्दै आएको थिएँ— त्यसमा मैले ‘रे’ को अन्तर्य मात्रै भेटिनँ, अरू धेरै कुरा पाएँ । कतिपय बाहिरी विश्वका यस्तै कथानकमा पनि शासकले कलासृजना र सर्जकमाथि गर्ने गरेको अत्याचार र दमनका कथाहरू लुकेकै हुन्थे, इतिहासमा यस्तै पढिएकै हो । जस्तो, दक्षिण भारतको अजन्तादेखि ताजमहल सृजनासम्मका इतिहासमा यस्तै कथा पढिँदै र सुनिँदै आएको हो ।
अनि मैले लेखेँ— मूर्तिको गीत :
— तिम्रो सुन्दर रूपमा बस्छु म ।
— यो रूप नै कुरूप भए के गर्छौ ?
— तिम्रो हेर्ने आँखामा बस्छु म ।
— आँखा नदेख्ने भए के गर्छौ ?
— मनको आँखाले हेर्छु म ।
— मनै ढुंगा भए के गर्छौ ?
— त्यही ढुंगामा तिम्रो मूर्ति कुँदेर,
तिमीलाई सम्झी माया गर्छु म,
माया गर्दै बाँच्छु म ।
गीत लेख्दाको सुरुआतमा त्यो ‘बाँच्छु’ भन्ने शब्द थिएन, बरु ‘मर्छु’ भन्ने मात्रै थियो । तर, यो मर्ने र बाँच्ने शब्दावली आएपछि अनायास म रोएको थिएँ, म थामिनै सकेको थिइनँ । त्यही भएर यसलाई ‘माया गर्दै बाँच्छु म’ बनाएको थिएँ ।
एक बसाइमा लेखिएको अलि लामो गीत थियो यो, यसमा लय पनि सहजै आयो— भगवतीकै आशीर्वाद रहेझैं । गीत तयार हुनासाथै सीमित आफन्त श्रोतामाझ पहिलोपटक इलाम घरमा यो गीत सुनाएको थिएँ— लगभग १५ वर्षअघि । गीत सुन्नेहरू गीतभित्रको कथा र संवेदना सम्झेर अचम्मित भएका थिए, पछि काँकडभिट्टाको साहित्य महोत्सवमा पनि यो गीत सुनाएपछि केही मर्मज्ञ श्रोतागणले गीतको भावभूमिबारे निरन्तर सोधिरहेकै हुन्थे ।
केही वर्षसम्म यो गीतको गायकी र लयमा परिमार्जन गरेपछि मैले गायिका झुमा लिम्बूसँग मिलेर यसमा स्वर भरेको थिएँ, बल्ल गीत रेकर्डमा आएको थियो । यसरी भन्नुपर्दा यो गीतका शब्द, स्वर वा लयभन्दा पनि यसभित्रको संवेदनाले मलाई सधैं हुँडलिरहेका कारण आज म यसमा पोखिएको हुँ ।
कला र कलाकारका यस्तै मिथकबारे अरूहरूले पनि लेखेका छन् । ‘हाम्रो संस्कृति’ भन्ने पत्रिकामा पनि यसबारे लेखिएको छ । गीतकार यादव खरेलले पनि यो कथा फेसबुकमा हाल्नुभएको रहेछ । पलाञ्चोक क्षेत्रमा यो कथा निकै प्रचलनमा रहेछ । यसका पछाडि यथार्थ कति छ, थाहा भएन । तर, यो सृजना मन–मस्तिष्कलाई संवेदित बनाउने एउटा कथा पक्कै हो, कम्तीमा मेरा लागि ।
यसरी कुनै मिथकभन्दा पनि बारम्बार सुनेको कुरालाई मैले शब्दमा उनेको हुँ । म कुनै दार्शनिक होइन, अथवा व्याख्यातासमेत होइन । यसको व्याख्या गर्न मलाई आउँदैन । मैले एउटा कल्पना गरेँ— यस्तो कल्पना आयो कि मैले थामिनै नसकेर लेखेँ । साँच्चै मैले रुँदै लेखेको हुँ यो गीत । यो गीतको शब्द र भावको संवेदनामा मेरी श्रीमती नीरा पनि भावुक हुन्थिन्, गीत गाइरहँदा नजिकै बसिरहेकी उनी के–के न बितेझैं गरी भान्सातिर लाग्थिन् । म आज सम्झिरहेको छु । यो गीतको कथानक सम्झेर र बुझेर इटहरीका प्रतिभा सम्पन्न कलाकार सोनु जयन्तीले एउटा गीति–नाटक नै बनाएका रहेछन् । कलालय नाटकको मञ्चमा यो थुप्रैपटक प्रदर्शनीमा आइसकेको मैले थाहा पाएँ । तर, आफैंले हेर्न भने पाएको छैन ।
यसरी कहिलेकाहीँ हठात उब्जिएको एकखालको क्षणिक भावना र स्वैरकल्पनाले निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति जन्माइदिने रहेछ, एउटा लहड पनि यति ‘विचारणीय’ बन्ने रहेछ कि मैले सोचेकै थिइनँ । धेरै वर्षअघि नक्साल भगवतीका डेरा–घरमा छँदै यो गीतको रचनागर्भमा जोडिएकी मेरी श्रीमती नीरा आज यो जगत्मै रहिनन् । तर, भगवतीको आराधना र कलाकारको सृजनामा पनि नजानेरै आफ्नै जीवनलाई उधिन्ने गरी यो गीत लेखेजस्तो संवेदित मुड–मुद्रामाझ म उभिएको छु । एउटा मूर्तिकारले मूर्तिलाई हेरेर भनेझैं श्रीमती नीराको मूर्तिजस्तो तस्बिर हेरेर नक्साल भगवतीकै सामुमा उभिएर म पनि भनिरहेको छु—
‘तिमीलाई सम्झी माया गर्छु म ।
माया गर्दै जिउँछु म ।’
मूर्तिकार : तिम्रो सुन्दर रूपमा बस्छु म ।
मूर्ति : यो रूप नै कुरूप भए के गर्छौ ?
मूर्तिकार : तिम्रो हेर्ने आँखामा बस्छु म ।
मूर्ति : आँखा नदेख्ने भए के गर्छौ ?
मूर्तिकार : मनको आँखाले हेर्छु म ।
मूर्ति : मनै ढुंगा भए के गर्छौ ?
मूर्तिकार : त्यही ढुंगामा तिम्रो मूर्ति कुँदेर
तिमीलाई सम्झी माया गर्छु म ।
माया गर्दै जिउँछु म ।
मूर्तिकार : भोलि तिम्रो मूर्ति देखेर
कतिले देवी सम्झनेछन् ।
आस्था र भक्ति भावले
प्रेमले पूजा गर्नेछन् ।
हजारौं हजार वर्ष पनि
तिम्रो र मेरो प्रेमको कथा
निर्जीव निर्जीव यही मूर्तिमा
सजीव भएर बाँच्नेछ ।
मूर्तिकार : तिम्रो सुन्दर मूर्तिमा कुदिन्छु म ।
मूर्ति : हातै काटे के गर्छौ ?
मूर्तिकार : अर्को हातले बनाउँछु म ।
मूर्ति : दुवै हात काटे के गर्छौ ?
मूर्तिकार : खुट्टाले अर्को बनाउँछु म ।
मूर्ति : खुट्टै काटे के गर्छौ ?
मूर्तिकार : बाँकी यही मुटु छ ।
यही मुटुभित्र तिमीलाई राख्छु म ।
तिम्रो ढुकढुकी भएर बाँच्छु म ।
मूर्ति : तिम्रो हातखुट्टा काट्ने हातहरूले
मेरो मुटुको ढुकढुकी रोक्नेछ ।
ढुकढुकी रोके, भन के गर्छौ ?
मूर्तिकार : त्यही दिनबाट निर्दयी ती हातहरू नै
आफ्तो चिता आफैं बन्नेछ ।
त्यही चितामा आफैले आफैलाई सल्काएर
खरानी भई नदीमा मिल्नेछ ।
सुन, सुन, सुन, सुन...!
जब जब म पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्न पुग्छु
जब जब म शोभा भगवतीको दर्शन गर्न पुग्छु
तब तब म तिनै महान् कलाकारको काटिएको दुवै हात सम्झँदै
आफ्नो दुवै हात जोडेर प्रणाम गर्दछु ।
जब जब म नक्साल भगवतीको दर्शन गर्न पुग्दछु
तबतब म तिनै महान् कलाकारको काटिएको दुवै खुट्टा सम्झँदै
उनको पाउमा श्रद्धाले शिर झुकाउँछु ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरमा गरिएको जंगबहादुर युगको त्यो जनगणना घर संख्याका आधारमा भएको थियो । घरहरू दुई प्रकारमा विभाजन थिए– झिंगटी घर, परालको घर ।
मंसिर ११, २०७८ हिमेश
जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा गराएको जनगणना के ‘जनगणना’ थिएन ? त्यसलाई होइन भन्ने हो भने ५८ वर्षपछि चन्द्रशमशेरको पालामा भएको जनगणना पनि ‘जनगणना’ थिएन । यदि चन्द्रशमशेरको जनगणनालाई ‘जनगणना’ मान्ने हो भने जंगबहादुरको जनगणना पनि ‘जनगणना’ नै हो । यत्ति ठोकुवा गर्छन्, इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर । अहिले पनि हाम्रोमा जनगणना चलिरहेको छ र यतिबेला जंगबहादुर–युगको ‘जनगणना’ सम्झिनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
भन्दै आएका छौं, चन्द्रशमशेरले विक्रम संवत् १९६८ मा गराएको जनगणना नै पहिलो हो । त्यो भनेको सन् १९११ को कुरा भयो । तर, हामीसँग जंगबहादुर–पालाको त्यस्ता दस्ताबेज उपलब्ध छन्, जसले भन्छ– उनकै पालामा नेपालमा पहिलो जनगणना भएको थियो । त्यो पक्कै पनि अहिलेजस्तो ‘वैज्ञानिक’ विधि, प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको थिएन । जंगबहादुरका छोरा पद्मजंगले लेखेका छन्– जन्म र मृत्युको अभिलेख राख्न जनगणना गरिएको थियो ।
जंगबहादुर सन् १९०७ को अन्त्यतिर बेलायत यात्राबाट फर्केका थिए । बेलायतमा उनले धेरै थोक देखे, अनि त्यसबाट उनी प्रभावित पनि भए । सम्भवतः त्यसकै आधारमा उनले जनगणना गराएको हुन सक्छ । त्यसअघि जंगबहादुरले सन् १९१० मा नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन जारी गरे । त्यसपछि उनले जनगणना गराएको देखिन्छ, वर्षको अन्त्यतिर । यसमा मुख्य गरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरको जनगणना गरिएको छ ।
पश्चिमतिर दाङ, सल्यान र प्यूठानसम्म पनि जनगणना गरिएको छ । यस्तै पाल्पा, अर्घाखाँचीसम्म पनि जनगणक पुगेका थिए । तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने पूर्वतिर कतै जनगणना गरिएको देखिन्न । यस्तो किन भयो, यसको उत्तर छैन । हुन सक्छ, पहिले काठमाडौं र पश्चिमको काम सकाएपछि पूर्वतिर काम गर्ने योजना बनाइएको थियो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो स्रोतसाधन थिएन, त्यसैले एकैचोटि सबै काम गर्न नसकिएको पनि हुन सक्छ ।
जंगबहादुरले विशेष गरी काठमाडौं सहरको जनगणनामा ध्यान दिएका छन् । त्यतिबेला काठमाडौं सहर कस्तो थियो ? इतिहासकार मानन्धर भन्छन्, ‘इन्द्रजात्राका बेला बौद्ध नेवार उपाकु यात्रामा निस्कने गर्छन् । यसक्रममा सहर घुम्ने काम गर्छन् । यो मध्यकालदेखि चल्दै आएको छ । त्यही सहरी क्षेत्रलाई जंगबहादुरले काठमाडौं सहर भनेर मानेका छन् ।’ काठमाडौंमा टुकुचा, पश्चिम बाग्मती उत्तर, विष्णुमती पूर्व, ठमेल चौकी सडक, दक्षिण सहरलाई काठमाडौं साँध सीमा मानेर जनगणना गरिएको देखिन्छ ।
पश्चिमी सीमा विष्णुमतीलाई मानिएको छ । विष्णुमती नदी भनिए पनि जनगणनाको काम न्ह्योखासम्म मात्र गरिएको छ । अहिलेको भुराख्यसम्म पनि जनगणना गरिएको छैन । सम्भवतः त्यतिबेला न्ह्योखाभन्दा पर बस्ती थिएन । भुराख्यः नेवारको देवाली मनाउने ठाउँ हो । त्यहाँ बस्ती नै बसेको थिएन होला । उत्तरी सीमा ठमेल चौकी लेखिएको छ । तर, ठमेल चौकी लेखिए पनि जनगणना ठंहितिसम्म मात्र गरिएको थियो । अहिलेको ठंहितिको उत्तरमा नजिकै क्वाबहाः छ ।
त्यो वस्ती मध्यकालकै हो । तर, त्यसमा यसबारे उल्लेख छैन्, खालि ठंहितिसम्म मात्र छ । दक्षिणमा भने वाग्मती नदीलाई सीमा मानिएको छ । तर, वाग्मती नदी भनिए पनि जनगणना लगन, ब्रह्मटोलसम्म गरिएको छ । यो पनि ठ्याक्कै उपाकु यात्रा गर्ने घेराभित्रै पर्छ । यही चार किल्लालाई जंगबहादुरले काठमाडौं सहर मानेका छन् । त्यतिबेला जगगणना घर संख्या र मानिसको संख्याको आधारमा गरिएको थियो ।
घरलाई पनि दुई प्रकारमा विभाजन गरिएको थियो । एउटा झिंगटी घर, अर्को परालको । धेरैको परालको घर थियो, केहीको पनि झिंगटी र पराल दुवैको घर भएको उल्लेख छ । मानिसको जनगणना गर्दा लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस भनेर छुट्याइएको छ । घरमूलीको नामदेखि पसलहरूको विवरण, पसल साहुजीको नाम, उक्त टोलका मठ–मन्दिर, देवालय, पाटी, सत्तल, ईनार, धारा र पोखरीको पनि विवरण जनगणनामा समेटिएको थियो । विसं १९१०, १९११ र १९१३ मा गरिएको त्यस हस्तलिखित जनगणनामा भक्तपुरका २४ टोल, पाटनका २५ टोलको विस्तृत विवरण समेटिएको छ । जनगणनामा त्यतिबेला काठमाडौंको घर संख्या ७ हजार ८ सय ८२ र जनसंख्या ४६ हजार ७ सय ७५ रहेको उल्लेख छ ।
स्रोत के ?
त्यो जनगणनाको कागजात खोज्ने श्रेय जगदीशचन्द्र रेग्मीलाई जान्छ, उनले यसबारे धेरैअघि लेखेका थिए । मानन्धर भन्छन्, ‘यो तथ्य स्पष्ट खुलाउनैपर्छ । जंगबहादुरको जनगणनाको कागजात मलाई उहाँले दिनुभएको पनि थियो । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको कागजातले पनि जंगबहादुरले गरेको जनगणनाको संकेत गर्छ ।’ ठीक यहाँनिर पद्मजंगले आफ्नो पुस्तकमा लेखेको पनि उल्लेख हुन आवश्यक छ । जंगबहादुरको जीवनीसम्बन्धी पुस्तकमा सन् १८६४ मा जनगणना गरिएको थियो भनी लेखिएको छ । त्यो भनेका विक्रम संवत्मा १९१९–१९२० तिर । तर, हामीसँग भएको कागजातले अर्कै तथ्य भन्छ, काठमाडौं सहरको जनगणना विवरण विक्रम संवत् १९११ जेठ सुदी २ मा तयार भएको भनेर उल्लेख छ ।
त्यसको अर्थ जनगणना १९१० मै भएको मान्न सकिन्छ । विवरण तयार पार्दा त्यो काममा खटिएका दुई कर्मचारीको नामसमेत छ । ती हुन्, कप्तान सताराम खत्री र सुवेदार जगतबहादुर खत्री । सताराम जंगबहादुरका निकै नजिकका विश्वासिला कर्मचारी थिए । जंगबहादुरको प्रसंगमा उनको नाम धेरैपल्ट आउँछ । इतिहासकार मानन्धरको निचोड छ– चन्द्रशमशेरको पालामा विधिवत् रूपमा जनगणना सुरु भएको हो, तर जंगबहादुरले गरेको जनगणनालाई नै पहिलो मान्नुपर्छ ।
चन्द्रशमशेरको पालामा भएको जनगणनाबारे पनि हामीसँग अहिलेको जस्तो पर्याप्त जानकारी छैन । उनीपछि भने नियमित प्रत्येक १०/१० वर्षमा जनगणना भयो । तर, जंगबहादुरको जनगणनाको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कसरी कम आँक्न मिल्छ ? त्यो १९ औं शताब्दीको मध्यसमय थियो, जतिबेला इटाली र जर्मनीको एकीकरण पनि भएको थिएन । अनि पूरै युरोपभरि अत्याचारी राजतन्त्रकै शासन थियो ।
मानन्धर भन्छन्, ‘यस्तै बेला जंगबहादुरले भएको प्रविधि प्रयोग गरेर जनगणना गरे । बेलायतबाट फर्केपछि उनले सबैभन्दा पहिले मुलुकी ऐन जारी गरे, अनि तुरुन्तै जनगणना गरे । यो सबै काम जंगबहादुर शक्तिमा आएको आठ वर्षपछि भएको हो ।’